Dastabej » नेपालगन्जका चोकका नाम कहिलेसम्म विवादित ?
नेपालगन्जका चोकका नाम कहिलेसम्म विवादित ? – Dastabej
नेपालगन्जका चोकका नाम कहिलेसम्म विवादित ?
उपमहानगरले चोकको नाममा भएको विवाद सल्टाउन सकेको छैन ।
नेपालगन्ज— धम्बोझीदेखि कोहलपुर जाने फोरेलेन सडक र गुलरिया जाने हुलाकी राजमार्ग जाने चौरहा छ । पाकाले वीरेन्द्र चोक भन्थे । अचेल धम्बोझी चोक । नेपालगन्जको धम्बोझी चोकमा यसअघि राजा बीरेन्द्रको शालिक राखिएको थियो । वीरेद्र चोकको नाम अझै पनि परिवर्तन भइसकेको छैन । तर लोकतन्त्रपछि शालिक भत्काइएको छ । राजाबादीहरुले पटकपटक राजा वीरेन्द्रको शालिक राख्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । हाल वीरेन्द्र चोकलाई धम्बोझी चोक भन्ने गरिएको छ । अलंकारीक राजाको मुद्दा उठाउने राप्रपाका नेता डा. धवल शम्सेर राणा मेयर छन् । तर राजा वीरेन्द्रको शालिक राख्न सकेका छैनन् । चोकमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको फोटो चप्काइएको छ ।
नेपालगन्जको सदरलाईनको त्रिभुवन चोकको अवस्था पनि त्यही हो । गणतन्त्रपछि शालिक फलिएको छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा नेपालगन्जका युवक कमल अधिकारीको मृत्यू भएपछि कमल मधेसी चोक नाम राखियो । अझै पनि नाममै विवाद कायम छ । विवादपछि त्यहा“ नेपाली झण्डा फहराइएको छ । हाल त्यहाँ त्रिभुवनको शालिक नराखिए पनि फाोटो राखिएको छ । नेपालगन्जमा यस्ता दर्जनौ चोकहरु छन्, जसको नामाकरण विवाद अझै टुङ्गीन बा“की छ ।
नामबिनाको खाली चौबाटो देख्नै हुन्न । रातारात चोकको नामसहित बोर्ड राखिन्छ । त्यो पनि आफ्ना निकटकाका व्यक्तिका नाममा चोक राख्ने चलन बढेको छ । खासगरी स्थानीय तह जनप्रतितिनिधिबिहिन भएत्यता यो क्रम बढेको थियो । तर स्थानीय सरकार आएको चार वर्षसम्म चोक व्यवस्थित हुन सकेको छैन । तर सार्वजनिक स्थानका चोकको नामाकरणका लागि कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य पूरा गर्नु पर्छ । सर्वदलिय बैठक अनिवार्य छ । सर्वसम्मत नामलाई स्थानीय सरकारको बोर्डले पारित गर्छ । मुलुकका लागि केही नकेही निस्वार्थ योगदान दिने व्यक्तिहरुको नामबाट चोक राख्ने नीति छ । राष्ट्रिय बिभुती, शहीद र मुलुकका राजनेताहरुको नामले चोक नामाकरण हु“दै आएका थिए । मन्त्री परिषदको निर्णयबाट चोकको नामाकरण हु“दै आएको थियो । तर नेपालगन्जका कतिपय सार्वजनिक स्थानलाई आफूखुसी चोकको नामाकरण गरेको पाइएको छ । त्यस मध्येको एक हो नेपालगन्ज—कोहलपुर फोरलेन सडकको कारकांदो चोक । तत्कालिन खासकारकांदो गाविसको ०५८ को परिषदले राष्ट्रिय बिभुती संखधर स्वाखा नाम राख्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीयका अनुसार त्यसअघि उक्त चोकलाई कारकांदो भनिन्थ्यो । पुर्ब राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हड्पेपछि राजाबादीहरुले त्यसलाई पारस चोक नाम दिए । तर गणतन्त्रपछि उक्त चोक हट्यो । हाल उक्त चोकको नाममा फेरि विवाद हुन थालेको छ । केहीले तत्कालिन खासकारकांदो गाविस परिषदले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन् । तर केहीले कारकांदोको पहिचान यथावत राख्नु पर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
नेपालगन्जका कतिपय टोलहरुको नाम पनि स्थानीयले आफै राखेका छन् । अनेक नाम दिएर टोलको नाम राखिए पनि नेपालगन्ज उपमहानगर बेखबर छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवलशम्सेर राणाले बोर्ड झुण्ड्याउदैमा चोक र टोलको नामाकरण नहुने जनाए । उनका अनुसार पुराना चोकहरुको नाम यथावत नै रहेका छन् । ‘कसैले बोर्ड झुण्डयाउ“दैमा चोकले अधिकारिता पाउने होईन । पहिलेको यथावत नै छन्,’ उनले भने,‘नया चोक तथा गल्लीको नामाकरण नगरपालिकाको बोर्डले पास गर्छ ।’ ‘वीरेन्द्रचोक मात्रै होइन यसअघि नामाकरण भइसकेका चोक यथावत छन् । नया“ निर्णय नभएसम्म त्यही नाम कायम रहन्छ,’ उनले भने,‘नया“ स्थानहरुको लिस्ट बनाएर छलफल गर्न बा“की छ ।’ नेपालगन्जमा निमार्ण भइरहेका नया“ सडक तथा टोलहरुको नाम स्थानीयले आफै गर्दै आएका छन् । टोलको नामाकरण विवाद त्यही छैन । तर चोकको नामाकरणका लागि भने कानुनी प्रकृया पूरा गर्न आवश्यक छ ।
नेपालगन्जको न्यूरोडमा हाल शहीद सेतु विकको शालिकसहित चोक छ । त्यसअघि ज्ञानेन्द्र चोक थियो । जनआन्दोलन ०६२÷६३ मा ज्ञानेन्द्र चोक तोडफोड भएको हो । चोक तोडफोडकै क्रममा प्रहरीले हानेको आश्रु ग्यास लागेर सेतु शहिद भएकी हुन । नेपालगन्जमा पुष्पलाल, गणेशमान, बीपी चोकहरु रहेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले चोकहरुको अभिलेख राख्ने जनाएको छ ।
८ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०५:४६ प्रकाशित